Ziziphi amagama eziphambili kunye nemigqaliselo yophando eya kuqhuba ukuhamba kwindlela ehamba ngayo kwiAnglish kwindlela enokwenzeka ngayo?
Akukho mfuneko yokutsho ukuba uphando lwegama elingundoqo luphakathi kwezinto eziphambili kwi-Engine Engine Optimization (SEO). Kulula nje, ayikho enye indlela yokuphucula ukubonakala kwewebhusayithi okanye iblogi yakho kunye nokuvezwa kwi-Google yangaphambili yophando olunikezwa yi-intanethi yehlabathi. Nantsi nje indlela ebalulekileyo ngayo amagama angundoqo amagama. Kodwa kwihlabathi lanamhlanje le-ecommerce kunye ne-shishini elikhuphisanayo lokuthungulula, kukho ibali elincinane.
Kuthetha ukuba kuwo wonke umakhi wesayithi okanye nayiphina indawo yokuthengisa eyaziwayo (njengemakethe ye-intanethi kwi-Amazon ngokwayo) kukho izinto ezithile ezikhethekileyo malunga nokuphanda ngegama eliqhelekileyo elingafanele linyanzeliswe. Kufana nokufana neemeko xa ufuna ukuqhuba i-traffic ukuya ku-Amazon. Le nto kukuba mhlawumbi indlela yodwa yakha uludwe oluphambili olumgangatho ophezulu lwezinto zokuthengisa ezithengisa phezulu ukuze ukwazi ukuzisebenzisa ngaphakathi kwiplani ye-shopper-centric yokukhangela ukucinga.
Yingakho ukuqhuba uphando olunzulu lwegama eliphambili ngokujoliswe ngqo kwiinjongo zokunyusa okufanelekileyo mhlawumbi yindlela efanelekileyo yokuqhuba umqhubi wezithuthi kwi-Amazon. Ngamanye amazwi, konke okufunekayo kukubeka ingqwalasela egxininise ngakumbi ekukhuphiswano nasekuhlaleni ukuhlalutya ukuhlangabezana neenjongo zokuthenga kunye nezinye iimbono eziqhelekileyo ezicacisa izigqibo eziqhelekileyo ngaphambi kokuba abantu bazinikezele ukuthenga. Kwaye kukho ezinye iipropati eziphambili eziqhelekileyo ezithathwa ngamagama angundoqo abaluleke kakhulu, ahloselwe ukuba angaguquki kakuhle kodwa ukuba wenze imali yangempela emva kwakho konke.
Ngoko, yile nto eyenza "amagama akho okhiye wegolide," kwaye kukuthi unako ukuqhuba ngempumelelo umzila kwi-Amazon product list. Ekugqibeleni, ukuze uzuze kwimodeli yoshishino efanelekileyo, ekufuneka isetyenziswe kwaye ihlolwe kakuhle kangangokuthi abantu bakulungele ukuvula izikhwama zabo kunye nokusetyenziswa kakubi-nokuba nayiphi imali yemali efunekayo ukuze bafumane loo mveliso oyifunayo.
Iimpawu ezintathu eziphambili zezinto eziphambili zeNtengiso
kunye nawo onke aphezulu enza amagama ophando alungiselelwe ukuba abe nokukwazi ukuqhuba ngempumelelo ukuhamba kwintengiso ye-Amazon yakho, okanye nayiphi na indawo ye-niche kwiziko lezorhwebo.
-Kulula ukubala - kuthetha ukuba kulindeleke ukuba banamanqanaba athatywayo okanye angamkelekanga kukhuphiswano, ngexesha elifanayo bebonisa ukuba ngalinye igama eliphambili ngoku lifunwa kakuhle kwaye lisetyenziswa rhoqo abathengi abakhathalelayo bathatha isabelo seengonyama sezigqibo zabo ukuba bathenge ngokukodwa kwi-intanethi.
Iinjongo eziPhambili zoPhando - zibonisa ukuba izicwangciso zakho zegama eliphambili zithethwa ukuba zithwale iqondo eliphezulu lokuthengisa, oko kwenza kube lula kubantu ukuba bathathe imali-ngokoqobo xa benokuqala ujonge kwilo gama elingundoqo, umzekelo ovela ngqo kwisihloko sakho sokubala.